डोल्पामा काँग्रेस र वाम गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा, कस्ले बाजी मार्ला ? « Naya Page
डोल्पामा काँग्रेस र वाम गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा, कस्ले बाजी मार्ला ?
डोल्पा: दुर्गम जिल्ला डोल्पामा आसन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि आ–आफ्नो पक्षमा मत माग्दै उम्मेदवार गाउँगाउँमा पसेका छन् ।
आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायतका साना तथा ठूला दलका उम्मेदवार प्रतिष्पर्धात्मक हिसाबमा प्रचारप्रचारमा जुटेका हुन् ।
आसन्न निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन संयुक्तरुपमा चुनावी प्रचारप्रचारका लागि अहोरात्र खटिएका छन् । गठबन्धनको तर्फबाट प्रदेश क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बनेका एमालेका नन्दसिंह बुढा आफ्नै क्षेत्रमा प्रचारप्रचारमा सक्रिय हुनुहुन्छ । पहिलो पटक सांसदको टिकट पाएका बुढा एमाले जिल्ला कमिटी सचिव हो ।
बुढाले अहिले आफ्ना कार्यकर्तासहित उपल्लो डोल्पामा भोट माग्दै घरदैलो गरिरहको छ । उनकै क्षेत्रमा पर्ने दुनै, जुफाल, रह, तिप्लालगायतका गाउँमा समेत घरदैलो अभियान तीव्र पारिएको डोल्पा एमालेले जनाएको छ ।
उक्त क्षेत्रको उपल्लो डोल्पामा पर्ने छार्का ताङसोङ गाउँपालिका, डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका र ठूलीभेरी नगरपालिकामा एमालेकै जनमत धेरै रहेकाले यस क्षेत्रबाट जित सुनिश्चित रहेको वाम गठबन्धनबाट एमालेबाट उम्मेदवार बनेको नन्दसिंह बुढाले दाबी गरे ।
प्रचारका क्रममा डोल्पाली जनताको घरदैलोमा पुग्दा जनताले एमालेबाहेक अरु कसैलाई नचिन्ने भएकाले यसपटक गठबन्धनका तीनैजना उम्मेदवारको जित सुनिश्चित भएको उनको भनाइ छ ।
उक्त क्षेत्रमा काँग्रेस पनि बलियो प्रतिष्पर्धीको रुपमा रहेको छ, उक्त क्षेत्रबाटै उम्मेदवार बनेका बेगमसिंह ठकुरी पनि कार्यकर्तासहित चुनावी प्रचारप्रचारमा उपल्लो डोल्पातिरै छ ।
स्थानीय चुनावमा ठूलीभेरी नगरपालिकाको प्रमुख पदमा थोरै मतले हार व्यहोरेको काँग्रेस यस कारण पनि बलियो प्रतिपक्षको रुपमा रहेको हो । काँग्रेसबाट प्रदेशमा उठेका ठकुरी पनि नयाँ अनुहार नै छ ।
ठकुरीलाई जिताउन काँग्रेस जिल्ला पार्टी सभापतिसहित सयौँ कार्यकर्ता चुनावी प्रचारप्रचारमा होमिएका छन् । त्यस्तै, गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनेको पूर्व सांसद धनबहादुर बुढा तीव्ररुपमा चुनावी प्रचारप्रचारमा जुटेको ।
दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा डोल्पाबाट माओवादी केन्द्र र काँग्रेसलाई हराउँदै भारी मतले विजयी हुनुभएका बुढा अहिले तल्लो डोल्पामा मत माग्दै जनताको घरदैलो गरिरहेको छ ।
डोल्पा एमालेमा अभिभावकको भूमिकामा रहेका बुढा सरल स्वभाव भएकै कारण धेरै जनताको मन जित्न सफल भएको स्थानीय नेता लक्ष्मी सार्कीले बताए।
प्र्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार बुढा धन, मन, असल स्वभावका धनी नेताका रुपमा जिल्लामा परिचित छ । डोल्पाबाट एक पटक सांसद भइसकेका बुढा यसपटक पनि भारी मतले विजयी हुने एमालेको दाबी छ ।
काँग्रेसबाट प्रतिनिधि सभाको टिकट पाएका अंगतकुमार बुढा र प्रदेश क्षेत्र नं १ का बेगमसिंह ठकुरी चुनावी प्रचारप्रचारको क्रममा उपल्लो डोल्पामा पुगेको छ ।
काँग्रेसबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनेको बुढाले डोल्पालाई विकास, सुशासनको बाटोतर्फ डो¥याउनका लागि अमूल्य मत दिई सहयोग गर्न डोल्पालीलाई आग्रह गरेको छ ।
जिल्ला पार्टी सभापतिसमेत रहनुभएका प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार बुढा विकासवादी, भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा अभियन्ताको रुपमा डोल्पामा परिचित छ।
त्यस्तै, प्रदेश क्षेत्र नं २ मा उठ्नुभएका काँग्रेसका उम्मेदवार सुरेश शाही नौलो अनुहार होइन । दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा काँग्रेसबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार बन्नुभएका शाही एमालेसँग पराजित भएको थियो ।
प्रदेश क्षेत्र नं २ मा स्थानीय चुनावमा र आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव नजिकिँदै गर्दा पटकपटक माओवादी केन्द्र र एमालेका स्थानीय कार्यकर्ताबीच हुने गरेको विवादका कारण पनि काँग्रेसलाई फाइदा हुने नेपाली काँग्रेस डोल्पाका सचिव जयनन्द उपाध्यायले दाबी गरे ।
स्थानीय चुनावमा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको प्रमुख पदमा झिनो मतले पराजय भोगेकाे भएका दिलबहादुर विष्ट काँग्रेसलाई भोट माग्दै तल्लो डोल्पामा घरदैलो अभियानमा जुटेको छ ।
त्यस्तै, संघ र प्रदेशमा उठेका साना दलहरु नयाँ शक्ति पार्टीका पुष्प बुढा, नेकपा ९माले०का हर्कबहादुर रोकायलगायतका विभिन्न पार्टीका उम्मेदवार पनि चुनावी प्रचारप्रचारमा अभियानमा जुटेका छन् ।